Xeeladaha ugu wanaagsan ee iOS 13 | Wararka IPhone
Xeeladaha ugu fiican ee iOS 13
Luis Padilla | | macruufka 13, dhowr
IOS 13 waxaa ku jira horumarin badan, sida habka habeenka, isbeddelada lagu sameeyo dalabka Guryaha, waxyaabaha la adeegsado ee ku jira iPad-ka, qaabeynta cusub ee codsiyada Sawirada, iwm Xaqiiqdii wax badan ayaad ka akhrisay dhammaan isbeddeladan oo waxaad horeyba uga haysatay wax ka badan inta lagu xakameeyo iPhone-kaaga. Laakiin waxaa jira isbeddelo kale oo badan oo aan sidaa u muuqan oo aan cinwaanno waaweyn ka dhigin warbaahinta, taasina waxay kuu fududeyn kartaa howlo badan, ama noqo waxaad sugaysay muddo dheer. Waxaan kuugu muujineynaa fiidiyowgaan xulashada ugu wanaagsan ee iOS 13 tabaha loogu talagalay iPhone.
IOS 13 waxay qaadatay 3D Touch waxayna noo keeneysaa taabashada Haptic, nidaam la mid ah laakiin aan isku mid ahayn. Tan macnaheedu waa in waxyaabaha qaar isbadaleen, sida dib u habeynta astaamaha, ama ka saarida codsiyada. Waxay umuuqataa inay ku qaadaneyso waqti dheer shaqooyinkaan hada, laakiin waxaa jira qaabab aad ugu dhaqso badan karto adigoon sugin liistooyinka soo baxa. Waxaan sidoo kale leenahay qaab cusub oo wax loo qoro iyadoo la adeegsanayo kiiboodhka asalka ah iyada oo aan loo baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah, ama suurtagalnimada in la dhex maro qoraalka sidii in kiiboodhku ahaa trackpad. Miyaad taqaan baaqyada si aad u nuquliso, u gooyso oo aad u dhejiso adigoon isticmaalin menus-ka soo-baxa? Ma ogtahay inaad dib uga noqon karto waxna ku noqon karto tilmaam fudud?
Sawirada iskaan ah oo kula wadaaga PDF adiga oo aan u baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah, qaado dhammeystiran qabashada dhammaan waxyaabaha ku jira bog internet si aad ugula wadaagto qof PDF ah, xakameyso metadata sawirrada aad la wadaagto dadka kale, si dhakhso leh ugala cusbooneysii App Store ama si deg deg ah ugu dhex wareego shabakad ama dukumiinti ... Wax kasta oo aad ku arki karto tan iyo in ka badan fiidiyowgaan. Xeelad kasta oo adiga muhiim kuu ah oo aannaan ku darin? Hagaag, ku qor faallooyinka si aan dhamaanteen u wada ogaano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Xeeladaha ugu fiican ee iOS 13
Fiidiyow weyn, wax badan ayaan bartay; Kaliya hal shay: marka la wadaagayo sawir, "Xulashooyinka" waxaan helayaa oo kaliya inaan Ku Daro "Dhammaan xogta sawirrada" oo aan ahayn ikhtiyaarka goobta; Waxaan la socdaa macruufkii ugu dambeeyay, maxaan u heli waayey?
Mahadsanid iyo ixtiraam wanaagsan
AirPods, wax soo saarka labaad ee ugu caansan Apple ka dib iPhone